Siri dia mamela anao hiditra amin'ireo fikirana fampiharana ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Tamin'ny fahatongavan'i iOS 7 dia nanambara i Apple fa ny mpanampy manokana ny mpampiasa azy, Siri, tsy beta intsony, dia manolotra ny fahafaha-miteny amin'ny feo lahy ary misy baiko vaovao am-polony. Eny, ao amin'ny iOS 7 dia nohatsaraina ny safidin'i Siri, saingy indrisy fa tsy mamela antsika hankafy izany i Apple, mpanampy amin'ny feo izay "tsy mila kasihinay" isika. Ohatra, ny takelaka Nexus 7 vaovao avy amin'i Google na ny Motorola Moto X dia afaka mampihetsika ny mpanampy ny feo nefa tsy manindry bokotra iray akory isika: mihaino ny baiko "Ok Google" foana izy ireo.
Ho fanampin'izany, Siri dia mbola tsy afaka manao asa sasantsasany, izay tokony ho tsotra, toy ny fanakatonana ny rindranasa na fanakatonana azy rehetra indray mandeha (ho setrin'izany, hiaiky i Siri fa te hahavita an'izany izy, saingy mbola tsy mahay). Na izany aza, Siri dia afaka manao hetsika izay tsy azo atao hatramin'izao: miditra amin'ny fikirana fampiharana. Ny vaovao tsara dia ny baikon'ny baiko vaovao dia miasa ho an'ny fampiharana Apple zanatany sy ny fampiharana an'ny antoko fahatelo. Raha te hampihetsika ny toe-javatra misy ny rindranasa dia mila mampiasa ireto baiko manaraka ireto fotsiny ianao:
"Sokafy ny fikirana" (rehefa ao anaty rindrambaiko ianao).
"Sokafy ny fikirana Gmail" (hanokatra ohatra Gmail)
Amin'izany fotoana izany, Siri dia hitondra anao mivantana any amin'ny toeran'ny fampiharana tadiavina, zavatra iray izay hamonjy anao amin'ny fivezivezena amin'ny alàlan'ny fitaovanao. Mazava ho azy, alaivo antoka alohan'ny fisidinana izay tianao hidirana dia misy fikirana.
Fanazavana fanampiny- Inona no vaovao ao amin'ny iOS 7 mifanaraka amin'ny fitaovako?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Siri dia mamela anao hiditra amin'ny sehatry ny fampiharana ao amin'ny iOS 7
Pablo Betés dia hoy izy:
"" Sokafy ny fikirana Instagram "(hanokatra ny fikirana Gmail, ohatra)." HAHAHA typo na Siri tsy mandeha tsara ...
Valiny tamin'i Pablo Betés
miorim-paka dia hoy izy:
Vaky aho, ny tsy fahatsiarovan-tena amin'ny fomba fiasan'izy io
Tena nanjary hendry i Siri ka nahafahany manavaka ireo lesoka ireo… ..